Ithegi: ubungakanani besampulu | Martech Zone
Ithegi: ubungakanani besampulu
Ikhaltyhuleyitha: Bala ubuncinci beSampula yoPhando lwakho
NgoLwesine, Aprili 22, 2021 NgoLwesine, Aprili 22, 2021 Douglas Karr
Ukuphuhlisa isaveyi kunye nokuqinisekisa ukuba unempendulo evakalayo onokuthi useke izigqibo zakho zeshishini kuyo kufuna ulwazi oluninzi. Kuqala, kuya kufuneka uqinisekise ukuba imibuzo yakho ibuzwa ngendlela engacacisi mpendulo. Okwesibini, kuya kufuneka uqinisekise ukuba uphonononge abantu aboneleyo ukuze ufumane iziphumo ezichanekileyo. Awudingi ukubuza wonke umntu, oku kunokuba nzima kwaye kubize kakhulu. Iinkampani zophando lweMarike
Kunyaka ophelileyo kube nefuthe kuwo onke amashishini, kwaye kusenokwenzeka ukuba usecicini lokukhuphisana. Ngee-CMOs kunye namasebe okuthengisa aphulukana nonyaka wenkcitho ebuyisiweyo, apho utyala imali kwiidola zakho zokuthengisa kulo nyaka zinokukubeka kwakhona kwintengiso yakho. Ngoku lixesha lokutyala imali kwisisombululo setekhnoloji esiqhutywa yidatha ukuvula ulwazi olungcono lokuthengisa. Ayilogumbi lokuhlala elinamaqhosha elinemibala yeefenitshala ezahlukileyo ezinemibala ekhethwe kwangaphambili engqubanayo (isisombululo esishelufini),